Aceris ဥပဒေ SARL
နေအိမ် / Archives for Aceris Law SARL
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဘို့တတိယပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်းရယူ – ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
02/01/2018 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများအတွက် Third-party ရန်ပုံငွေရယူလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်မဖြစ်. Aceris ဥပဒေ LLC ပြီးသားဒီမှာပြဿနာအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားထားပြီး. Third-party ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည့်အခါ, အလားအလာတရားစွဲဆိုခြင်းအားမကြာခဏအောင်မြင်စွာအနေနဲ့ခုံသမာဓိရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်ဘာ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အသိပညာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်အားနည်းနေ. အောက်ပါစာရင်းရေးသားခွငျးအားဖွငျ့, ကျနော်တို့က demystify ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
24/11/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
နိဒါန်းဤ blog တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဆဲသေးခက်ခဲဥပဒေရေးရာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအာရုံစိုက်: အမေရိကန်တရားရုံးများနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတဆင့်သက်သေအထောက်အထားရယူကူညီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိခုံရုံးအကြားဆက်ဆံရေးကဘာလဲ? တစ်ဦးအမှုကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်, တဦးတည်းဒေသခံအမေရိကန်တရားရုံးများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုအောင်စဉ်းစားပါစေခြင်းငှါ, သက်ဆိုင်လျှင်. ဤသည်အောက်၌ပြုနိုင်ပါတယ် […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု
Aceris ဥပဒေကို Global ဆုပေးပွဲအတွက်တစ်နှစ်တာ၏အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေခြင်းဥပဒေအခိုင်အမာအဆင့်
06/11/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Aceris ဥပဒေ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးလစဉ်အားဖြင့်တစ်နှစ်တာ၏အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေခြင်းဥပဒေအခိုင်အမာအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည် 2017, ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်. အဆိုပါဆုချီးမြှင့်အတွက်, Aceris ဥပဒေဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အကွံဉာဏျအဖြစ်၎င်း၏မကြာသေးမီကအလုပျအတှကျဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိ, အထူးသ ICC ကအောက်မှာအငြင်းပွားမှုများအတွက်, ICSID, UNCITRAL, SCC, DIAC, […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေခိုင်မြဲသော, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အဆင့်
Aceris Securities အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19 မြောက်အမေရိကလိုင်းများအတွက်သန်း ICC ကအနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ Off ရပ်ကွက် 131 တန်ပြန်အတွက်သန်း
25/10/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Aceris ဥပဒေအခြားမြင့်မားကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ, နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဆုလုံခြုံထားပါတယ်, အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ပိုလျှံအတွက်ခုံသမာဓိဆုရယူ 19 တစ်ဦးမြောက်အမေရိက client ကိုကိုယ်စားသန်း, အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ပိုလျှံအတွက်တန်ပြန်ပိတ်ထား warding စဉ် 131 သန်း. ICC ကိုခုံသမာဓိအတွက်နောက်ဆုံးဆုအောက်တိုဘာလတွင်ပြန်ဆိုခဲ့သည် 2017. ဒါဟာအင်ဂျင်နီယာသက်ဆိုင်ရာ, ပုံစံ, ဝယ်ယူရေး […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, FIDIC အနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ, ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လုံခြုံရေး
17/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Aceris ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများနှင့်ဇွန်လရက်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ် Co-sponsored တစ်ရက်-ညီလာခံ 2, 2017 ကနေကျောင်းသား Societies များမှ4ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရှေ့နေများအစည်းအရုံး (ပဲရစ် 1 Pantheon-Sorbone), အသင်း du မာစတာ2နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဥပဒေ (ပဲရစ်2Pantheon-Assas), ဥပဒေကျောင်းသားများ၏ Alumni အစည်းအရုံး […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ